Ukuphila komuntu siqu kaKristuina Asmus noGarik Kharlamov
UKristina Asmus noGarik Kharlamov: indaba yothando, izithombe ezingavamile
Indaba yothando lo mbhangqwana ingenza sengathi i-melodrama yesenzo esithinta isenzo: owesifazane omuhle, othobekile uyathandana nesimo se-hooligan esiphelelwe amandla. Kungakhathaliseki ukuthi yikuphi, lesi simo sengqondo esibhekiswe ku-Christina Asmus noGarik Kharlamov savuka ngenxa yemifanekiso yesikrini eyaletha udumo lwabaculi.
UKristuina Asmus noGarik Kharlamov bahlangana kanjani?
Umlingisi osemusha uSchepkinsky esikoleni wathandwa ngisho nangesikhathi esifundweni sakhe, lapho ehola i-Vary Chernous kulolu chungechunge oluthi "Interns". Ekuphileni, u-Christina usezici eziningi ezifana ne heroine - njengesizotha futhi onamahloni.
Esikhathini esidumile se-TV show Comedy Club, uGarik Kharlamov ungomunye wabahlali abadumile kakhulu. Esikhathini esiteji, umbukiso wabumba isithombe somuntu onesihluku, umlingisi wezintatheli ngomqondo omuhle wokuhleka usulu, ohlukaniswa nokuhlambalaza.
Naphezu kokuthi uKristina noGarik basebenze ndawonye iminyaka emithathu esiteshini esisodwa se-TNT, baze bahlangana nemicimbi eminingana, babonisana ... ku-Inthanethi. Akukho nokuxhumana okungabalulekile ku-Twitter kungazelelwe kwaletha abaculi ndawonye. Njengobe uKhristina kamuva wabatshela, bacabanga ukuthi ukuphola enkundleni yokuxhumana kuyisiqalo sobuhlobo.
Ngemva kwesonto, uKharlamov no-Asmus banquma ukuqhubeka bajwayele kwimodi yocingo, bese ubuhlobo bukhula ngokushesha bube yintando enobudlova.
UKristina Asmus noGarik Kharlamov - isahlukaniso esinzima kanye nomshado oyinyumba
Lapho u-Christina Asmus noGarik Kharlamov beqala ukuphola, umbukiso washada. Ngomkakhe uJulia Leschenko, lo mdwebi waphila iminyaka eyisikhombisa, kanti ezimbili zazo - emshadweni osemthethweni.
UJulia, njengoba kwenzeka njalo, wafunda ngakho konke lokhu. Intombazane ayikwazanga ngisho nokucabanga ukuthi othandekayo wakhe umkhohlise izinyanga ezimbalwa. Lapho ebuza ngokuqondile umyeni wakhe imibuzo, wenqaba konke. UJulia wayekhathazekile, esaba, wayengenakuqonda lutho.
Ku-Star Party, ngaleso sikhathi, kwase kukhulunywa kakade ukuthi uKharlamov wayenezindaba nenkanyezi ye-Internov. Abalandeli abaningi bamlahla uKristina, owaba yilo "razluchnitsya." NgokukaJulia Leshchenko, umyeni wakhe wamcela ukuthi ahlukanise, futhi ngemva kwesonto wabhala ephepheni lakhe enkundleni yezenhlalo ukuthi izinyanga ezinhlanu zisesimweni sokuhlukanisa:
Mayelana nokuhlukumezeka okungaqondakali ku-@AsmusKristina kanye nesithakazelo esibucayi somshini ophuzi ebuhlotsheni bethu: 1. Ngisesimweni sokuhlukanisa izinyanga ezingaphezu kwezinhlanu. 2. Angizange ngihlale nomkami izinyanga ezintathu. 3. Azikho izingane. Akekho owangithatha noma kuphi! Kulokhu, mhlawumbe, konke. Ngiyabonga. Ikhethini. Ah, yebo ... ngihlangana noKristuina Asmus
Kusukela ngalesi sikhathi, u-Christina noGarik abasasifihli ubuhlobo babo. Lo mbhangqwana ufinyelela njalo kuma-lens of photographers, kuyilapho bobabili begcizelela ukuthi bayindoda nomkayo.
Ngokushesha kubonakala sengathi u-Asmus ulindele ingane.
UGarik Kharlamov ubika izindaba zakamuva mayelana nokuphila kwakhe siqu ku-Twitter:
Ungayeki izingxabano nokucabangela ngempilo yethu. Ukuze uqiniseke ama-experiencers. Sishadile, sisezinyangeni ezingu-5!
Abathandi ngisho nokuhlelela abangane babo emshadweni, kodwa ngesikhathi somkhosi umdayisi usengashadile ngokomthetho noYulia Leschenko. Owesifazane wayengekho esheshayo ukuhlukanisa. Usuku lo mshado owaqedwa ngalo lwaqala ukubizwa yinkantolo ekupheleni kuka-2012, kodwa abameli bakaLeschenko baphikisana nalolu suku. Ngenxa yokubuyekezwa kwecala, usuku lokuhlukaniswa kukaGarik Kharlamov noYulia Leshchenko lwango-Okthoba 10, 2013.
Ngesikhathi esifanayo, ummeli kaJulia wathola ukuthi phakathi kuka-Igor Kharlamov noKristina Asmus, umshado wabhaliswa ekuqaleni kuka-Juni 2013 kwelinye lamahhovisi okubhalisa kwedolobha, okungukuthi, ngaphambi kokuba umshado wokuqala uqedwe ngokomthetho. Ngakho-ke, umshado osemthethweni we-showman noCristina Asmus ungacatshangwa ngokungemthetho.
Umndeni wangempela - u-Christina Asmus noGarik Kharlamov nendodakazi yakhe, isithombe
Indaba emnyama yokuhlukanisa, isehlukaniso nomshado kubonakala sengathi zijabulisa kakhulu abalandeli bomshado, kodwa hhayi ngokwabo. Njengoba esesinde isahlukaniso esinzima nomkakhe wokuqala, uGarik Kharlamov nomkakhe omusha, uChristina Asmus, babonakala bengakhathazeki nhlobo ngoba bebeyiziqhawe eziyinhloko zezindaba ezidabukisayo okwesikhashana.
Lo mbhangqwana ujabule ubuhlobo bawo futhi wahlala ekulindele ukuzalwa kwengane - abazali abazayo babefuna odokotela abanolwazi, bathenga isikhalazo, umgibeli, ryoshonki kanye namathoyizi. U-Christina Asmus wabeka izindaba zakamuva ku-instagram yakhe. Ngesikhathi esifanayo, umlingisi akazange aphendule ngamaphuzu amabi ayebhekiswe kuye, ngezikhathi ezithile avela ekhasini lakhe.
Ngesikhathi, ngoJanuwari 2014, uKhristina Asmus noGarik Kharlamova babenendodakazi, u-Anastasia, lo mbhangqwana babika izindaba ezijabulisayo ezincane zabo ezincane:
Ngishaya, ungangihalalisela, ngoba namuhla nginomntwana ongcono kakhulu emhlabeni kusukela kumuntu omuhle kunabo bonke emhlabeni. Angizizwa nje nginomuzwa omuhle, kodwa ngomlingo
Ngami, lolu suku seluhle kakhulu ekuphileni. Manje nginguPapa Harlo, kodwa umkami othandekayo ungumuntu we-heroine wangempela!
Emva kokuzalwa kwendodakazi yakhe uChristina akazange ahlale kulo myalelo. Kungakapheli amasonto amathathu, lo mdlali wabuyela emuva ejwayelekile futhi wabuyela e-Yermolova Theater, lapho evele esiteji ngendima ka-Ophelia ekusebenzeni kokuqala "Hamlet".
Abaningi ababhalisile baphuthuma ukulahla uKristina, ozimisele ukuya emsebenzini ngokushesha, kodwa wakwazi ukuhlanganisa ngobuhlakani bobabili umama nesiteji. Ngisho nokusebenza, u-Asmus akazange ayeke ukuncelisa indodakazi yakhe.
Ukubheka izithombe ezithintekayo nokuvuma okuqotho emagumbini akhe amancane, uKristina Asmus noGarik Kharlamov bayajabula ngempela. Abashadile basebenzisa sonke isikhathi sabo samahhala ndawonye.
Umdlali we-actress uhamba nomyeni wakhe kuwo wonke umshini obomvu nemikhosi, lo mbhangqwana uphumule ndawonye bese uphuma.
Izithombe ezihlangene zikhuluma kahle ngokuthi ubumbano lukaKristuina Asmus noGarik Kharlamov, oluye lwadlula izivivinyo eziningi ezibucayi, luba namandla nsuku zonke.
UDmitry Shepelev uqala impilo entsha
Amadoda nempilo yomuntu siqu kaChulpan Khamatova
Ozithandayo abesifazane kanye nokuphila komuntu siqu kaDanila Kozlovsky
Iyini igama langempela likaDmitry Medvedev?
UGlafira Tarkhanov: umlingisi othandekayo nomama wezingane ezine
Injabulo yomuntu siqu kaPaul Kuzokwenzeka kanjani: indlela evelele ngayo yaba yindoda yomndeni oyisibonelo (izithombe ezingavamile zomkakhe nezingane)
Owesilisa Bheka Imidwebo Yabesifazane
Wheel History: iqoqo lezimpahla ezingakhohlwayo La Nature de Chaumet
Ingabe kuhlale kungalungile ukuba nobugovu?
Yenza ukwakheka kwezinhlobo ezahlukene zobuso: imfundo elula ekuhambeni
Ubani ozothola inkathi yesi-17 ye-Battle of Psychics? Ukubikezela nokubikezela komsebenzi omkhulu we-Russia
Ukupheka okuningiliziwe ukupheka
Ukudla okunempilo kwezingane kusukela enyakeni ongu-1 ubudala
Owesifazane wanamuhla onendima yendoda
I-allergies yezingane: indlela yokudla ingane yakho
Ukushushiswa kuka-Alla Pugacheva - ukulandelana kwezenzakalo ze-scandal yokuqala ye-show in 2017
Indlela yokukhulisa i-aloe ezimweni zasekhaya
Ikhekhe le-Bukovina Nut
Isaladi kusuka kumahhashi-mackerel